IFTIINKACUSUB.COM: Taariikh nololeedkii Saxaabigii boqorka ahaa Najaashi [Asxama ibnu Al-abjar]
Magaca Najaashi waa naanays loo bixin jiray cidii boqor ka noqota dawladii Xabashida, sida Fircoonba loogu yeedhi jiray cidii boqor ka noqota dalka Masar. Najaashii noolaa xilligii nabigeena Muxamed waxa magaciisa la dhihi jiray Asxama ibnu Al-abjar.
Najaashi aabihii ayaa ahaa boqor ka taliya dhulka Xabashida, kadibna wasiiradii iyo lataliyayaashii boqorka ayaa dhagar maleegay oo waxay iskku dhaheen boqorku wuxuu leeyahay hal wiil oo kaliya, wiilkaasina waa madi, markaa waa inaan dilnaa boqorka oo aanu isaga badalkiisa boqor ka dhiganaa walaalkii oo lahaa laba iyo toban wiil. Dabcan lataliyayaashii boqorku sidii ayey kaga dhabeeyeen waxayna dileen boqorkii, badalkiisiina waxa yimid walaalkii.
Ninkii iibsaday najaashi ayaa u yimid boqorkii oo ku dhahay: Boqoroow, waxa ninman wasiiradaadu iga iibiyeen wiil adoon ahaa, ayagoo iga qaatay lacag, kadibna wiilkii ayey igala noqdeen, ee lacagtaydii ha isiiyaan ama wiilkii aan iibsaday.
Boqorkii Najaashi wuxuu dhahay: Ninkan haloo celiyo lacagtiisii ama wiilkiisi, maxaa yeelay markuu Ilaahay aniga mulkigaygii iisoo celinayey igamuu qaadanin wax laaluush ah!! Lataliyaashii boqorka ayaa bixiyey lacagtii laga qaaday ninkii ganacsadaha ahaa.